We.com.mm - မနက်စောစောထနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရန် (၅)ချက်
မနက်စောစောထလေ့မရှိတဲ့သူတွေ၊ မနက်စောစောမနိုးတဲ့သူတွေ ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်က ရုံးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မနက်စောစောမနိုးရင် အဆင်မပြေဘူးလေ။
အခုကသိတဲ့အတိုင်းပဲ ကားလမ်းတွေကအရမ်းပိတ်တာနဲ့ ကိုယ်ကသာအိပ်ယာထနောက်ကျလိုက်ရင် သွားရော။ ဒီတော့ မနက်စောစောထနိုင်အောင်၊ နိုးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်.....။
1. ညအိပ်ရင်ဖုန်းကို airplane mode လုပ်ပြီးအိပ်ပါ....။
ညအိပ်ရင်ဖုန်းဝင်လာတာမျိုး၊ message ဝင်လာတာမျိုးတွေက အိပ်စက်ခြင်းကိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေပါတယ်။ silent လုပ်ပြီးအိပ်လို့တော့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်တဲ့သူက ဒါကိုယ်အိပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာ မသိတော့ နောက်လည်းဆက်လာမှာပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် အမြဲဒီအချိန်ရောက်တိုင်း airplane mode လုပ်ထားမယ်ဆို ဆက်တဲ့သူကလည်း နောက်ဆိုသိသွားမှာပါ.....။
2. ည ၈နာရီ နောက်ပိုင်းအစာမစားမိအောင်ကြိုးစားပါ....
ည ၈နာရီ နောက်ပိုင်းစားတဲ့အစာကိုချေဖျက်ဖို့ကခက်ခဲပါတယ်.... ။အစာမကြေရင်အိပ်ပျော်ဖို့လည်း ခက်ပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် ည ၈နာရီ နောက်ပိုင်းကို အစာမစားမိအောင်ကြိုးစားပါ။ ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးကို နွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက် သောက်ပြီးအိပ်တာလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်....။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ နွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်သောက်ပြီးအိပ်တာက ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ကဗိုက်ဆာတတ်တဲ့သူဆို ဒီနွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်သောက်လိုက်တော့ ဗိုက်လည်းပြည့်တယ်.... အိပ်လည်းပျော်တယ်....
3. မနက်စောစောထရမယ့်နေ့တွေမှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးနေပေးပါ.....
လမ်းလျှောက်တာမျိုး၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ပြေးတာမျိုး၊ workout လုပ်တာမျိုး၊ ကတာမျိုး နဲ့ တခြား လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေမဲ့အရာမျိုးတွေကိုလုပ်ပေးပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပေးတော့ ကိုယ့် energy တွေကိုထုတ်သုံးလိုက်ရတယ်လေ။ နေ့ဘက်မှာ အဲ့လို energy များများသုံးတော့ ညဘက်အိပ်ရင် ပိုပြီးနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေတာပေါ့...။
4. မအိပ်ခင်မှာ အိပ်ယာကိုအရင်ရှင်းပါ....
အိပ်ယာကရှုပ်ပွနေတာမျိုး၊အနံ့အသက်တွေနဲ့ ဖုန်တွေရှိနေတာမျိုးဆို အိပ်ရတာအဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် မအိပ်ခင်မှာ အိပ်ယာကိုအရင်ရှင်းပေးပါ...။ အမွှေးနံ့သာဖျန်းတာမျိုးလေးလည်းလုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်...။ အိပ်ယာကရှင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာလေးဖြစ်နေမှ၊ အနံ့အသက်တွေမရှိမှ ကောင်းမွန်စွာနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်မှာပါနော်.....။
ဒီနေ့ (၇) နာရီဆို နောက်နေ့လည်း (၇) နာရီထပေးပါ။ ဒါမှသာအကျင့်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆို အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တာနဲ့ အလိုလိုနိုးလာမှာပါ။ ညဘက်ကိုလည်း (၁ဝ) နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး အိပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ညဘက်စောစောအိပ်ပြီး၊ မနက်စောစောပုံမှန်လေးထပေးတာက တစ်နေ့လုံးစိတ်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါတယ်။ နိုးစက်ပေးပြီးထတာထက် ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် ထတာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ....။
ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ စောစောထတဲ့အကျင့်လေးရလာပြီး၊ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်....။
သင်ခေါင်းကိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ စားပေးသင့်တဲ့အစားစာ (၅) မျိုးကတော့…
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နေပေမယ့် ဗိုက်ကအဆီတွေမကျတာ ဘာကြောင့်များလဲ
ဗိုက်မှာရှိတဲ့အဆီတွေကို ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ လျော့ကျသွားစေမယ့် ဂျင်းရည်